We Fight We Win. -- " More than Media ": လက်တစုတ်စာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ သူတို့ အမျိုးတွေရဲ့ ဝိသမလောဘကြောင့်ရဲဘော်တို့ အသေဆိုးနဲ့ သေရတယ်။ ဒီကောင်တွေကို ဒို့ တော်လှန်မယ်။ ငါဒို့ပြည်သူနဲ့ အတူလက်တွဲဖို့ သံဓိဌိာန် ပြုပါတယ်။ ရဲဘော်တို့ ကောင်းရာသုကတိလားပါစေ။
လက်တစုတ်စာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ သူတို့ အမျိုးတွေရဲ့ ဝိသမလောဘကြောင့်ရဲဘော်တို့ အသေဆိုးနဲ့ သေရတယ်။ ဒီကောင်တွေကို ဒို့ တော်လှန်မယ်။ ငါဒို့ပြည်သူနဲ့ အတူလက်တွဲဖို့ သံဓိဌိာန် ပြုပါတယ်။ ရဲဘော်တို့ ကောင်းရာသုကတိလားပါစေ။
မီးသတ်ရဲဘော်တွေရဲ့ခိုင်မာတဲ့သံဓိဌာန်
should we find out who was exactly responsible for this happening?
all family who lost their love one should get fair compensatin.
the price of 23 lives was too high.
nothing are worth than human live.
may god bless them who lost their live and rest in peace.
may god bless BURMA/ MYANMAR and all people from burma not like happening in future. thank you.
29 December 2011 at 18:13